Android 12 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Android 12 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo
Munguva pfupi yapfuura Google yakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeApple 12 iyo inouya neakawanda matsva, ayo mamwe acho atanga tichitaura nezvawo pano pablog mune dzakasiyana kuburitswa kweshanduro dzekuyedza.
Yenyaya huru novelties inomira kubva kuApple 12 tinogona kuwana iyo interface dhizaini dhizaini, iyo inofungidzirwa kuve date yakakosha kwazvo munhoroondo yeprojekti.
Uye ndezvekuti eIyo nyowani dhizaini inoshandisa iyo «Zvinhu Iwe» pfungwa yakaitwa sechizvarwa chinotevera cheMhando Dhizaini. Pfungwa nyowani inozoiswa otomatiki kune ese mapuratifomu uye interface zvinhu, uye haizodi chero shanduko kubva kune vanogadzira application.
Imwe nzira itsva inomira, ndiyo new widget dhizaini, izvo zvakaitwa kuti zvioneke, kutenderera kwemakona kwakagadziridzwa uye kugona kushandisa mavara akasimba kuenderana neiyo theme theme yakapihwa, pamwe neanopindirana masimba akadai semabhokisi ekutarisa uye mabhatani eredhiyo akawedzerwa. Suye yakapa dzimwe nzira dzekudzora saizi yewijeti uye kugona kushandisa inoteerera dhizaini yezvinhu zvewidget (inoteerera dhizaini) kugadzira chaiwo marongero anochinja anoenderana nesaizi yenzvimbo inoonekwa.
Kune rimwe divi, iyo kugona kugadzirisa otomatiki iyo palette sisitimu kune iyo yekumashure ruvara Sarudzo yakasarudzwa: iyo system inozvionera iyo yakasarudzika mavara, inogadzirisa iyo yazvino palette, uye inoshandura shanduko kune ese interface interface, inosanganisira iyo ziviso nzvimbo, yekuvharira skrini, majeti, uye vhoriyamu kudzora.
Vakadaro yakaitwa mitsva mitsvasenge kuwedzera zvishoma nezvishoma pachiyero uye kufamba kwakatsetseka kwenzvimbo paunenge uchitsikisa, kuoneka, uye kufambisa zvinhu pachiratidziri. Semuenzaniso, kana iwe ukanzura chiziviso pane iyo yekuvharira skrini, iyo nguva chiratidzo chinongoerekana ichiwedzera uye inotora iyo nzvimbo yaimbotorwa neyekuzivisa.
Kuonekwa kwenzvimbo yekudonha-pasi nezviziviso uye nekukurumidza marongero zvachinja. Sarudzo dzeGoogle Kubhadhara uye smart kumba kudzora zvakawedzerwa kune iyo nhamba yekukurumidza marongero.
Tambanudza overcroll mhedzisiro yakawedzera, izvo zvinoita kuti zvive pachena kuti mushandisi apfuura scroll scroll uye asvika kumagumo ezvinyorwa. Nemhedzisiro nyowani, mufananidzo wezvinyorwa watambanudzwa uye bounced. Iyo nyowani scroll scroll end chiratidzo cheimiriro iri pamusoro nekutadza, asi pane sarudzo mumasetho ekudzosera maitiro ekare.
Uyewo, Mufananidzo mumufananidzo wakagadziridzwa (PIP, Mufananidzo mune Mufananidzo) uye inotsvedza shanduko mhedzisiro. Kana iwe uchigonesa otomatiki kuchinjira kuPIP pamwe neyekutanga chiratidzo (nekufambisa pasi pechidzitiro kumusoro), iko iko iko iko iko ipapo ipapo chinoshandura kuenda kuPIP modhi, pasina kumirira kuti iyo animation ipedze.
Kune chikamu de optimizations uye mashandiro ekuita mune iyi itsva vhezheni ye Android 12 imwe kana kupfuurakukosha kwakanyanya kwehurongwa hwekuita: mutoro uri paCUU yeiyo huru sisitimu masevhisi yakadzikira ne22%, izvo zvakazo tungamira mukuwedzera kwehupenyu hwebhatiri ne15%.
Nekuderedza kukakavara kwekukiya, kudzikisira latency, uye kugadzirisa I / O, iwe unovandudza mashandiro eshanduko kubva kuchimwe chikumbiro kuenda kune chimwe uye kupfupisa nguva yekutanga application.
Dhatabhesi yemubvunzo mashandiro akavandudzwa nekushandisa inline optimizations mune iyo CursorWindow mashandiro. Nezve diki dhata, CursorWindow iri 36% nekukurumidza, uye kune maseti ane anopfuura 1000 mitsara, iyo yekumhanyisa inogona kusvika kusvika makumi mana neshanu.
Yekushandisa hibernate mode yaitwa, iyo inobvumidza, kana mushandisi asina kunyatsobatana nechirongwa kwenguva yakareba, otomatiki gadziridza mvumo dzakambopihwa kunyorera, rega kuuraya, dzorera zviwanikwa zvinoshandiswa nechishandiso, senge ndangariro, uye bvisa kuvhurwa kwemabasa. kumashure uye kutumira Push notices.
Mode inogona kushandiswa kune akawanda maficha uye inodzivirira mushandisi dhata kune mapurogiramu akanganwika kwenguva refu anoramba achiwana. Kana zvichidikanwa, hibernate modhi inogona kusarudzika kuremerwa muzvirongwa.
Iyo Yekuvanzika Dashibhodhi dhizaini yakaitwa pamwe nekutarisisa kweese marongero emvumo, zvichikubvumidza iwe kuti unzwisise kuti ndeipi data iyo mushandisi wekushandisa anokwanisa kuwana. Iyo inongedzo zvakare inosanganisira yenguva inoratidza iyo yekushandisa yekuwana nhoroondo kune maikorofoni, kamera, uye nzvimbo data. Zvekushandisa kwega kwega, unogona kuona ruzivo uye zvikonzero zvekuwana zvakavanzika data.
Uyewo maikorofoni uye kamera zviitiko zvekuratidzira zvakawedzerwa kune iyo dashboard, izvo zvinoonekwa kana iko kushanda kuri kuwana iyo kamera kana maikorofoni. Kubaya pazviratidzo kunounza dialog ine marongero, ichikubvumidza iwe kuona kuti ndeipi application iri kushanda nekamera kana maikorofoni uye, kana zvichidikanwa, bvisa mvumo.
Pakupedzisira zvinonzi firmware zvidzore zvakagadzirirwa zvePixel nhepfenyuro zvishandiso, pamwe neyevamwe Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo uye Xiaomi modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Android 12 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo
Vivaldi 4.3 inovandudza iyo yekubata chishandiso, iyo yekurodha pani uye neshanduro
FSF inoti "hupenyu huri nani kana iwe ukadzivirira Windows 11" inoyambira kuti iri kutorera vashandisi rusununguko rwavo